Diam-penina | Jolay 2006 | 2
Ny Kristianina no betsaka indrindra eto an-tany
Ankapobeny — Nampidirin'i fraz @ 15:17
Amin'ny resaka finoana dia ny mpino Kristianina no betsaka indrindra eo amin'ny 2 billion eo, manaraka ny Silamo eo amin'ny 1.3 billion ary ny fahatelo kosa dia ireo Athé izay miisa 1.1 billion.
Ireo no hita ato amin'ny ity fampitahana ity . Hahitana ihany koa ny mikasika ireo finoana samihafa misy izy io sy ireo hevitra fonosiny.
Fanamarihana : Ilay billion resahiny io dia azo adika hoe 1 000 millions amin'ny firenena hafa (Frantsa, Allemagne). Ny billion any U.S mantsy (mino aho fa any angamba io) dia 9 ny isan'ny 0 , any amin'ny hafa kosa ny billion --> million indroa --> 6 * 2 = 12 ny isan'ny 0 . Fa na izany na tsy izany aloha mitombina foana ilay fandaharana azy.
Mahavariana ity atidoha ity
Ankapobeny — Nampidirin'i fraz @ 13:05
Anisan'ny mahavariana ny misiterin'ny zava-bitan'ny atidohan'olombelona. Ohatra fotsiny ity ambany ity : tsy misy mihetsika mihitsy amin'ireo sary ireo. Raha hijery ohatra misimisy dia alaivo ato